Umsebenzi womuntu umele lokho ake abhekana nakho nobuntu bakhe. Okuhlinzekwa ngumuntu kanye nomsebenzi owenziwa umuntu wokumela yena. Ukubona komuntu, ukucubungula komuntu, ukuhlunga komuntu kanye nengcebo yomcabango wakho kubandakanywa emsebenzini wakhe. Ikakhulukazi, lokho umuntu ake abhekana nakho kwenza akwazi ukumela umsebenzi wakhe kangcono, futhi lokho umuntu abhekane nakho kuzoba yisakhi somsebenzi wakhe. Umsebenzi womuntu ungabonakalisa lokho ake abhekana nakho. Uma abanye abantu bebhekana nesimo sokungenzi lutho, indlela eningi abahlanganyela ngayo iqukatha izinhla ezingezinhle. Uma ababhekane nakho ngesikhathi esithile kukuhle futhi ikakhulukazi uma benezindlela ezinhle, indlela abahlanganyela ngayo iba ngegqugquzelayo, futhi abantu bazokwazi ukuqhubeka nokubahlinzeka ngokuhle. Uma umsebenzi engenzi lutho ngesikhathi esithile, ukuhlanganyela kwakhe kuyohlala kuqukethe izici ezimbi. Lolu hlobo lokukhonza luyadumaza, futhi abanye bazodumazeka benganakile ngokulandela ukukhonza kwakhe. Isimo sabalandeli sishintsha ngenxa yesimo somholi. Lokho umsebenzi ayikho ngaphakathi kuba yikho akubonakalisayo, futhi umsebenzi kaMoya oNgcwele uvame ukushintsha ngokwesimo somuntu. Usebenza ngokwalokho umuntu abhekene nakho futhi awumphoqi umuntu kodwa wenza lokho okuphoqelelwa umuntu ukuthi kuhambisane nesimo salokho abhekana nakho. Lokhu kusho ukuthi ukukhonza komuntu kuyehluka kunezwi likaNkulunkulu. Lokho okukhonzwa ngumuntu kudlulisa lokho okubonwa umuntu kanye nalokho abhekana nakho, kuveza abakubonayo kanye nalokho ababhekana nakho esisekelweni somsebenzi kaNkulunkulu. Umsebenzi wabo ukuthola, emuva kokukhuluma kukaNkulunkulu, lokho okumele bakwenze noma bangene kukho, bese bekudlulisela kubalandeli. Ngakho, umsebenzi womuntu umela ukungena nokusebenza kwakhe. Nakanjani, umsebenzi onjalo uxutshaniswe nezifundo zomuntu kanye nalokho ake abhekana nakho noma neminye imicabango yomuntu. Noma ungasebenza kanjani uMoya oNgcwele, kungaba wukuthi usebenza kumuntu noma kubuntu bukaNkulunkuku, kuhlala kuba abasebenzi abaveza ukuthi bangobani. Yize kunguMoya oNgcwele osebenzayo, umsebenzi utholakala kulokho okuyikho ngokwendalo, ngoba uMoya oNgcwele awusebenzi ngaphandle kwesisekelo. Ngamanye amazwi, umsebenzi awenziwa ngeze, kodwa uhlala uhambisana nezimo zangempela kanye nezimo eziyiqiniso. Yile ndlela kuphela engaguqula isimo somuntu, ukuthi indlela abebona izinto ngayo kudala kanye nokuqonda kwakudala kungashintsha. Umuntu uveza lokho akubonayo, abhekane nakho kanye nalokho angakucabanga. Ngisho noma kungaba yizimfundiso noma indlela yokubona izinto, konke lokhu kufinyeleleka kukho ngokucabanga komuntu. Ngisho noma ungaba ngakanani umsebenzi womuntu, ungedlule ubukhulu balokhu umuntu abhekana nakho, lokho okubona umuntu, noma lokho okucatshangwa noma okucutshungulwa umuntu. Lokho okuvezwa uNkulunkulu yilokho uNkulunkulu uqobo ayikho, futhi lokhu kungaphezu kokufinyelela komuntu, kungaphezu kwemicabango yomuntu. Uveza umsebenzi Wakhe wokuhola bonke abantu, futhi lokhu akuhambisani nemininingwane yalokho umuntu ake wabhekana nakho, kodwa kunalokho kumayelana nendlela Yakhe yokuphatha. Umuntu ubonakalisa lokho ake abhekana nakho ngenkathi uNkulunkulu eveza ubuyena—lokhu kuyisimo Sakhe esingokomlando futhi singaphezu kokufinyelela komuntu. Lokho umuntu ake abhekana nakho ngalokho akubonayo kanye nolwazi alutholile sisuselwa ekubonakaliseni kukaNkulunkulu ubuyena. Lokho okubonwayo nolwazi kubizwa ngokuthi isimo somuntu. Sibonakaliswa esisekelweni sesimo somuntu semvelo kanye nasemandleni akhe angempela; ngakho kubizwa ngokuthi isimo somuntu. Umuntu ukwazi ukukhonza lokho abhekane nakho kanye nalokho akubonayo. Lokho angabhekananga nakho noma angakubonanga noma umqondo wakhe ongafinyeleli kukho, okusho, izinto angenazo ngaphakathi, akakwazi ukukukhonza. Uma lokho umuntu akubonakalisayo kungasikho lokho abhekane nakho, kuba umcabango wakhe noma imfundiso yakhe. Ezwini, akukho okuke kwenzeka kulokho akukhulumayo. Uma uke wahlangabezana nezinto zasemphakathini, uzokwazi ukukhonza ngokucacile ulandela ubudlelwane basemphakathini obuxakile. Uma ungenawo umndeni kodwa abanye abantu bakhuluma ngezindaba zomndeni, izinto eziningi abakhuluma ngazo ngeke uze uziqonde. Ngakho, lokho okukhonzwa umuntu kanye nomsebenzi awenzayo kumele ingaphakathi lakhe. Uma umuntu ekhonza ngokuqonda kwakhe ukusola kanye nokwahlulela, kodwa ungakaze ubhekane nakho, awunaluphikisa ulwazi lwakhe, njengoba ungeqiniseke ngokugcwele ngalo. Lokhu kudalwa ukuthi lokho akhonzisa ngakho kumayelana nento ongakaze ubhekane nayo, into angazi lutho ngayo, futhi umqondo wakho uwukwazi nokuyicabanga. Ungakwazi ukucaphuna olwazini lwakhe kuphela indlela yesikhathi esizayo ephathelene nokusola nokwahlulela. Kodwa le ndlela ingasebenza njengokuqonda okususelwa emfundisweni futhi ingethathe indawo yokuqonda kwakho, kanjalo nalokho oke wabhekana nakho. Kungenzeka ucabange ukuthi akushoyo kuyiqiniso, kodwa uma sewubhekana nakho, uthola ukuthi kuningi kukho okungenzeke. Kungenzeka ukuthi ubona ukuthi olunye ulwazi oluzwayo luyinto engeke yenzeke nhlobo; ugcina imicabango mayelana nayo ngesikhathi, futhi yize ukwamukela, wenza njalo uzihudula. Kodwa uma sewubhekana nakho, ulwazi olukwenza ucabange okuthile luba yindlela ozoqhuba ngayo. Futhi uma uzamazama, uzoqonda kangcono isilinganiso seqiniso kanye nencazelo yamagama akhe. Uma sewuke wabhekana nokuthile, ungakwazi ukuqala ukhulume ngolwazi okumele ngabe unalo mayelana nezinto obhekane nazo. Phezu kwalokho, ungakwazi nokwahlukanisa phakathi kokuthi ngolukabani ulwazi oluyiqiniso nokungenzeka kanye nolwazi olususelwa emfundisweni nolungacacile. Ngakho, ukuthi ngabe ulwazi olukhulumayo luhambisana kakhulu neqinisio kuncike ekutheni ngabe unolwazi olufanele yini ngalokho oke wabhekana nakho. Lokho oke wabhekana nakho ngobuqiniso, ulwazi lwakho luzoba ngolwenzekayo kanye nolubalulekile. Ngalokho oke wabhekana nakho ungakwazi nokuthola ukukwahlukanisa nokukuqonda, ujulise ulwazi lwakho, futhi wandise ukuhlakanipha nokuqonda endleleni yokuziphatha. Ulwazi olukhulunywe ngabantu abangenalo iqiniso luyimfundiso, noma lungaphakama kangakanani. Lolu hlobo lomuntu kungenzeka abe ngumuntu okhaliphe kakhulu uma kuziwa ezindabeni zenyama kodwa ehluleke ukwahlukanisa ezindabeni zikamoya. Imbangela yalokhu ukuthi abantu abanje abangakaze babhekane nezindaba zikamoya. Laba abantu abangakhanyiselekile ngezindaba zikamoya futhi abangaziqondi izindaba zomoya. Noma yiluphi uhlobo lolwazi olukhulumayo, kuphela uma kunguwe, kuyilokho obhekane nakho, khona-ke kuzoba kuwulwazi lwakho siqu, ulwazi lwakho lweqiniso. Lokho okukhulunywayo okumayelana nemfundiso, okuwukuthi, labo abangenalo iqiniso noma okwenzeke ngempela, abakhuluma ngakho kusangathiwa kuyisimo sabo, ngoba imfundiso yakho ifika isuselwa emicabangweni yabo futhi iwumphumela womqondo wabo ekujuleni kwawo, kodwa akusiyo imfundiso, kuwumcabango nje kuphela! Lokho abantu abehlukene ababhekana nakho kumele izinto ezingaphakathi kubo. Bonke labo abangakaze babhekane nesimo esithile ngokomoya ngeke bakwazi ukukhuluma ngolwazi lweqiniso, noma balungise ulwazi olumayelana nezinto zikamoya. Umuntu uveza lokho ayikho ngaphakathi—lokhu kuqinisekisiwe. Uma umuntu efisa ukuba nolwazi ngezinto zikamoya kanye neqiniso, kumele abhekane nezinto ngokweqiniso. Uma ungakwazi ukukhuluma ngezinto ezejwayelekile ngempilo, uyokwazi kanjani-ke ukukhuluma ngezinto zikamoya? Labo abangakwazi ukuhola amabandla, bapha abantu ukuphila, futhi babe abaphostoli, kumele babhekane nezinto ngokweqiniso, babe nokuqonda okuyikho ngezinto zikamoya, ukwamukela okuyiqiniso kanye nokubhekana neqiniso. Ngabantu abanjalo kuphela abafanelekela ukuba ngabasebenzi noma abaphostoli abahola amabandla. Kungenjalo, bangakwazi ukulandela okungenani futhi ngeke bahole, noma okungenani babe abaphostoli abanika abantu ukuphila. Lokhu kudalwa ukuthi umsebenzi wabaphostoli awusikho ukubaleka noma ukulwa; uwukushumayela ukuphila nokuholela abanye ekuguquleni izimo zabo. Labo abenza lo msebenzi banikwe umsebenzi wokuthwala umthwalo osindayo, ongeke uthwalwe yinoma ngubani. Lolu hlobo lomsebenzi lungenziwa kuphela yilabo abanokuphila, okuwukuthi, yilabo ababhekane neqiniso. Kungenziwe yinoma ubani ongashiya konke, ongagijima noma ongazinikela ngokuthi uzosebenzisa anakho; abantu abangakaze babhekana neqiniso, abangakahlungwa noma abangakahlulelwa, abakwazi ukwenza lolu hlobo lomsebenzi. Abantu abangakaze babhekana nokuthile okuwukuthi, abantu abangakaze babhekane nokwenzekayo, abangakwazi ukubona okwenzekayo ngokucacile ngoba bona uqobo abanakho ukuba kulesi simo. Ngakho, lolu hlobo lomuntu ave nje kuwukuthi alukwazi ukwenza umsebenzi wokuhola, kodwa luzosetshenziselwa ukunquma uma engenalo iqiniso isikhathi eside. Ukubona okhuluma ngakho kungafakazela ubunzima obhekane nabo empilweni, phezu kwalokho okubalulekile osolwe ngakho kanye nezimo owahlulelwe ngazo. Lokhu kuyiqiniso nasezimweni zokulingwa: Izinto umuntu acwengwa ngazo, izinto umuntu antengantenga kuzo, lezi yizinto umuntu okumele abhekane nazo, izinto umuntu akwazi ukwenza okuthile ngazo. Isibonelo, uma umuntu ebhekene nezinkinga emshadweni, uzokhonza kakhulu, "Ngibonga uNkulunkulu, ngidumisa uNkulunkulu, kumele nganelise okufiswa inhliziyo kaNkulunkulu futhi nginikele impilo yami iyonke, ngibeke umshado wami ezandleni zikaNkulunkulu. Ngizimisele ngokubeka impilo yami iyonke kuNkulunkulu." Zonke izinto ezingaphakathi kumuntu zingakukhombisa lokho ayikho ngokuhlanganyela. Isivinini umuntu akhuluma ngaso, ukuthi ngabe ukhulumela phezulu noma phansi, izindaba ezinjalo okungezona izindaba eziphathelene nalokho abake babhekana nakho ngeke kukwazi ukumela lokho anakho nayikho. Bangakwazi ukusho ukuthi ngabe isimilo sakhe silungile noma sisibi, noma ngabe isimo sakhe silungile noma sibi, kodwa ngeke kulinganiswe nalokho abhekane nakho. Ikhono lokuziveza uma ukhuluma, noma ikhono noma isivinini sokukhuluma, noma nje ukulinganisa ngeke kuze kuthathe indawo yolwazi ngalokho oke wabhekana nakho. Uma ukhuluma ngalokho oke wabhekana nakho uwedwa, ukhonza ngendlela oyincikisa ekubalulekeni kwazo zonke izinto ezingaphakathi kuwe. Inkulumo yami imele ubumina, kodwa engikushoyo kungaphezu kokufinyelela komuntu. Engikushoyo akumele lokho umuntu abhekana nakho, futhi akusikho lokho okubonwa umuntu, kuphinde kube yinto umuntu angeke akwazi ukuyithinta, kodwa kuyilokho engiyikho. Abanye abantu bazisa ukuthi ngikhonza lokho engibhekane nakho, kodwa ababoni ukuthi lokho kuyisibonakaliso sikaMoya ngokuqondile. Nakanjani, engikushoyo yilokho engibhekane nakho. Yimi engenze umsebenzi wokuphatha eminyakeni eyizinkulungwane eziyisithupha ezedlule. Ngibhekane nakho konke kusukela ekuqaleni kokudalwa kwabantu kuze kube manje; ngingakakwazi kanjani ukukhuluma ngakho pho? Uma kuziwa esimweni semvelo somuntu, ngikubone ngokucacile, futhi sesiside isikhathi ngikubhekile; ngihlala kanjani ngingakwazi ukukhuluma ngayo ngokucacile? Selokhu ngaqala ukubona ubunjalo bomuntu ngokucacile, ngifanelekile ukusola umuntu futhi ngimahlulele, ngoba bonke abantu bavela Kimi kodwa bakhohlakaliswe uSathane. Nakanjani, ngifanelekile nawukuhlola umsebenzi engiwenzile. Yize lo msebenzi ungenziwanga inyama Yami, uveza uMoya ngokuqondile, futhi yilokhu engikwenzile nengiyikho. Ngakho, ngifanelekile ukukuveza futhi ngenze umsebenzi okumele ngiwenze. Umuntu ukhuluma ngalokho abhekane nakho. Yilokho engikubonile, lokho imiqondo yabo ekwazi ukufinyelela kukho kanye nalokho imizwa yabo engakuzwa. Yilokho abangakwazi ukukukhonza. Amazwi akhulunywe uNkulunkulu esesimweni somuntu enyameni akuveza ngokuqondile ngoMoya futhi aveza umsebenzi owenziwe nguMoya. Inyama ayikabhekani futhi ayikakuboni, kodwa kusaveza ubuyena ngoba inyama iphila ngoMoya, futhi uveza umsebenzi kaMoya. Yize noma inyama yehluleka ukufinyelela kuwo, kuwumsebenzi osewenziwe nguMoya. Emuva kokuba sesimweni somuntu, ngokuveza kwenyama, wenza abantu bakwazi ukumazi uNkululunkulu uqobo futhi kuvumeleke ukuthi abantu babone isimo sikaNkulunkulu kanye nomsebenzi awenzile. Umsebenzi womuntu wenza abantu bacacelwe kabanzi ngalokho okumele bangene kukho kanye nalokho okumele bakuqonde; okubandakanya ukuholela abantu ekuqondeni nasekubhekaneni neqiniso. Umsebenzi womuntu wukuqhubekisa abantu; umsebenzi kaNkulunkulu ukuvula izindlela ezintsha kanye nokuvulela isintu izinkathi ezintsha, kanye nokudalulela abantu lokho okungaziwa abantu benyama, okwenza ukuthi bazi isimo Sakhe. Umsebenzi kaNkulunkulu ukuhola sonke isintu.
Kumele nazi indlela yokwahlukanisa phakathi komsebenzi kaNkulunkulu nomsebenzi womuntu. Ungabonani emsebenzini womuntu? Kunezinto eziningi lokho umuntu ake ahlangabezana nakho ngaphambilini emsebenzini wakhe; lokhu okuvezwa umuntu yilokho ayikho. Umsebenzi kaNkulunkulu uqobo uphinde uveze lokho ayikho, kodwa lokho ayikho kwehlukile kunalokho umuntu ayikho. Lokho umuntu ayikho kumele lokho adlule kukho kanye nempilo (lokho umuntu adlula kukho noma abhekana nakho empilweni yakhe, noma izimfundiso zokuphila anazo), futhi abantu abaphila ezindaweni ezahlukene baveza izimo zabantu ezahlukene. Ukuthi ngabe unalo ulwazi ngalokho owake wabhekana nakho ngaphambilini okuphathelene nabantu okuthi uphila kanjani futhi ubhekana kanjani nomndeni wakho kungabonakala kulokho okubonakalisayo, kube ngeke uze ubone emsebenzini kaNkulunkulu esesimweni somuntu ukuthi ngabe Yena uke wabhekana nabantu yini. Wazi kahle kamhlophe ingqikithi yomuntu, angakwazi ukudalula zonke izinhlobo zemisebenzi ephathelene nezinhlobo zabantu. Uphuma phambili kakhulu ekudaluleli isimo sokukhohlakala somuntu kanye nokuziphatha kabi. Akaphili phakathi kwabantu abaphila impilo yasemhlabeni, kodwa wazi kahle ngesimo semvelo sabantu basemhlabeni kanye nayo yonke inkohlakalo yabantu abaphila impilo yasemhlabeni. Unjalo nje. Yize engabhekani nomhlaba, uyayazi imithetho yokubhekana nomhlaba, ngoba usiqonda kahle isimo somuntu. Unolwazi ngomsebenzi kaMoya ongeke ubonwe ngamehlo omuntu futhi ongeke kuzwiwe izindlebe zomuntu, namuhla kanye nangaphambilini. Lokhu kufaka phakathi ukuhlakanipha okungesiyo imfundiso yokuphila nezimangaliso okulukhuni kubantu ukuziqonda. Yingakho eyilokhu ayikho, kwenziwe kwavuleleka kubantu futhi kufihlakele kubantu. Lokho akuvezayo akusikho lokho umuntu onokwehlukile ayikho, kodwa yilokho okuyigalelo elitholakalayo kanye nesimo sikaMoya. Akahambi emhlabeni kodwa wazi konke okukuwo. Uxhumana "nezazi zomlando" ababengenalwazi noma ukukhanyiseleka, kodwa ukhipha amazwi aphakeme kunolwazi futhi angaphezu kwabantu abakhulu. Uphila phakathi kwabantu abandikindiki abangenabo ubuntu futhi abangaziqondi izivumelwano zabantu kanye nempilo, kodwa angacela isintu ukuthi siphile ngobuntu obujwayelekile, khona manjalo aveze isisekelo kanye nobuntu obuphansi besintu. Konke lokhu kuyilokho ayikho, kungaphezu kwalokho umuntu wenyama negazi ayikho. Kuye, asikho isidingo sokuthi ubhekane nempilo ethinta abantu exakile, nezima nengcolile ukuze wenze umsebenzi adinga ukuthi uwenza futhi udalula ingqikithi yenkohlakalo yesintu. Impilo yokuphila nabantu engcolile ayiyingcwelisi inyama. Umsebenzi kanye namazwi Akhe kudalula ukungalaleli komuntu futhi akuhlinzeki umuntu ngolwazi lwalokho ake abhekana nakho ngaphambilini kanye nezifundo zokubhekana nomhlaba. Akadingi ukwenza uphenyo ngomphakathi noma ngomndeni womuntu uma enika umuntu ukuphila. Ukudalula nokwahlulela umuntu akusikho ukuveza ulwazi Lwakhe ngalokho Ake abhekana nakho ngaphambilini enyameni Yakhe; kuwukudalula ukungalungi komuntu emuva kokwazi ukungalaleli komuntu kwesikhathi eside kanye nokubekezelela inkohlakalo yomuntu. Umsebenzi awenzayo ukudalula isimo Sakhe kubantu nokuveza ubuyena. Nguye kuphela ongenza lokhu, akusiyo into engenziwa umuntu wenyama negazi. Mayelana nomsebenzi Wakhe, umuntu akanakusho ukuthi uwuhlobo luni lomuntu. Umuntu akakwazi ukumahlukanisa ngokwezigaba njengoba Kunguye owadala umuntu ngesisekelo somsebenzi Wakhe. Lokho ayikho kuphinde kumenze angakwazi ukwahlukaniswa ngokwezigaba njengomuntu odaliwe. Umuntu ukwazi ukumcubungula ngendlela engasiyo eyomuntu, kodwa akazi ukuthi angamfaka kuziphi isigaba, ngakho umuntu uphoqeleleka ukuthi amfake esigabeni sikaNkulunkulu. Akumangazi ukuthi kungani umuntu enza nje, ngoba wenze umsebenzi omkhulu kakhulu phakathi kwabanu kangangoba umuntu akakwazi ukwenza njalo.
Ukuthatha amazwi Ami njengesisekelo sokuphila kwabo—lokhu kuyisibopho sabantu. Abantu kumele bakhe isabelo sabo kuzo zonke izingxenye zamazwi Ami; uk…